Tamsaasa kallattii:Waltajjii Waliigala haala yeroo biyyaa keessarratti ‘Dire Dawa Global Network’ – Kichuu
HomeAfaan OromooTVTamsaasa kallattii:Waltajjii Waliigala haala yeroo biyyaa keessarratti ‘Dire Dawa Global Network’
Tamsaasa kallattii:Waltajjii Waliigala haala yeroo biyyaa keessarratti ‘Dire Dawa Global Network’ Minisootaatti qophaa’erratti koreen sagantichaa,warreen waraqaa qorannoo dhiyeessan akkasumas hirmaattonni maal jedhan?
Kun Tasumaa Waan Ta’u hin qabne. Ani akka Nama Dhuunfattii Baay’een Balaaleffadha. Shaashamannee keessatti ta’e. Booji’amaan iyyuu Kabajaa qaba. Biyyaa Seera qabu keessatti kana Gochuun Oromumma tokko hin Calaqqisiisu. Naamusa fi Sansakkaa Qabsoo Oromoo Tokko illee hin Ibsu. Guutumaa Guututtii Oromoo Kan Bakka Bu’uu miti. Gochaa Kanaan Oromoon akka walootti Ololaaf saaxilamuu hin qabu. Ilmi Namaa balleessuu mala garuu karaa seera qabeessaan to’achuu fi Qaama Seeraa fi Mootummatti kennu malee Bifa Kanaan Fannisuun Kuni Maalii? Eenyuuf moo Ololaa Kamiif Karaa Banuudhaa?
1/ Waan akkanaa kun qabsoo Oromoof gufuu gurraacha, akkasumas qabsoo xureessuudha!
2/ Ija addunyaa duratti akka kanatti nama dararuun akka addunyaan Oromoo akka bineensaati ilaalu gochuudha!
3/Diinni keenya Nu ajjeesaa ture garuu fuula addunyaati baasee naa ilaalaa naman ajjeesaa jiraa jedhee hin beeku!
4/aadaan keenyaaf sirnni Gadaa keenya akkas miti Biyyaa Abbaa Gadaa keessatti kana arguun safuu Abbootii keenyaa cabsuudha!
Qaamni Mootummaa Boonbiin Qabamee akka hin Jirreeffi Konkolaataan Gubatees Kan Komiishinii Poolisii Oromiyaa Ta’u Ragaa Bahaa Jiran. Gochii kun Tasa Oromoo Fi Qabsoo Oromoo Bakka hin Bu’uu